Nkwado nde mmadụ na Apple ka ọ kwụsị "mkpọpu" nke talent | esi m na mac
Nkwado nde mmadụ na Apple ka ọ kwụsị "Mmiri" nke Talent
Ọ na-agụkarị akụkọ nke ụlọ ọrụ Cupertino na-ahụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị injinia bara uru ma ọ bụ na ha nọ n'otu ọrụ dị mkpa n'ezie. ha na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ihi otu ihe ma ọ bụ ọzọ.
Nke a bụ kpọmkwem ihe Apple chọrọ izere site na usoro mkpali nde mmadụ na-abịakwute gị maka ụbọchị ndị a dị mkpa n'ụzọ ọ bụla. Ma ọ bụ na dịka onye a ma ama Bloomberg na-anakọta, ụlọ ọrụ Cupertino na-akwalite ndị ọrụ kachasị elu na ego ngwaahịa ngwaahịa dị n'etiti $ 80.000 na $ 120.000.
Jide n'aka idobe talent na Apple
Ihe ọ na-ekwu Bloomberg bụ na dị ka ọ na-eme na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ Cupertino, ihe o bu n'obi na nha a bụ ijigide nkà ahụ nke o nwere na ụfọdụ ndị ọrụ ya. Nnukwu ụlọ ọrụ nkà na ụzụ gburugburu ụwa na-eme otu ihe ahụ na ọ bụ ụlọ ọrụ na-amasị Meta, Google ma ọ bụ Apple n'onwe ya ga-ejigide ma chebe talent ha nke ọma iji zere ịhapụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka akụkọ Bloomberg si kwuo, ụlọ ọrụ a na-akpọ Facebook goro otu narị ndị injinia n'aka Apple dịka ndị ọzọ si n'ụzọ ọzọ. N'oge ọrịa na-efe efe, ọ na-esiri ike ime ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ ma kwụsie ike n'ọrụ ha, ihe a na-achọkarị bụ nke a maara nke ọma site na nnukwu mba dị iche iche na-eji ohere ịbanye ndị ọrụ ahụ nwere nkà karịa ma ọ bụ ndị pụtara n'elu. ndị ọzọ na-enye ihe mkpali, ụgwọ ọnwa ka mma na ihe ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkwado nde mmadụ na Apple ka ọ kwụsị "Mmiri" nke Talent
Bluetooth bụ teknụzụ na-amachi ịdịmma AirPods
Apple ga-ewepụta AirTag pụrụ iche na Japan na Jenụwarị 2022